Tag: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပြိုင်ပွဲဥပမာများ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 24, 2013 သောကြာနေ့, မေလ 17, 2013 Douglas Karr
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အများစုသည်သူတို့ Facebook ချိတ်ဆက်မှုတိုးမြှင့်လိုခြင်းနှင့် Likes မ်ားလုပ်သောအခါပထမ ဦး ဆုံးပြုလုပ်ရမည့်အချက်မှာပြိုင်ပွဲအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Facebook ၏ရှုပ်ထွေးသောစည်းမျဉ်းများကြောင့်သာမက၊ သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်သည့် app တစ်ခုကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ဆိုသောအချက်ကိုလူအများအပြားရှုပ်ထွေးစေသည်။ ပြီးပြည့်စုံသောအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖန်တီးခြင်းသည်အနုပညာနှင့်သိပ္ပံပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ShortStack ၏အသစ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်လိုအပ်သမျှကိုရရှိရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 11, 2009 တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 23, 2009 Douglas Karr
အကယ်လို့သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လူကတခြားနိုင်ငံမှာရှိရင်သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။ တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားပြည်နယ်? တစ် ဦး ကအခြားမြို့? လမ်းတစ်လျှောက် မင်းဆိုင်မှာလား သူတို့ကိုသင်မတူကွဲပြားစွာပြောဆိုနိုင်မည်လော သင် ... သင့်တယ်! Geotargeting သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဏ္inတွင်အတော်အတန်ကြာသည်။ ငါအလားအလာအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ရန် drive ကိုအချိန်နှင့်အကွာအဝေးကိုအသုံးပြု။ စီးပွားဖြစ်အညွှန်းကိန်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ရန်ဒေတာဘေ့စစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်